Baro Sida Loo Abuuro Xayeysiin Hal abuur Waxtar Leh Oo Shaqeysa | Abuurista khadka tooska ah
Baro sida loo abuuro xayeysiin hal abuur leh oo shaqeynaya
Baro sameynta hal abuur xayeysiin wax ku ool ah in aan helo hadafkeena si guul leh adigoon dulmarin. Adoo adeegsanaya fikirka maskaxda waan horumarin doonaa khariidad ee waxa aan rabno matalaan garaaf ahaanHaddii qaybtani ay fashilanto, garaafku sidoo kale wuu dhici doonaa.
Xayeysiintu waxay ka kooban tahay a xiriirka fikirka iyo fikradaha isku xidhka, sidii ay ahayd qorshe waxaan bilaabi doonnaa abuuritaanka a burburka waxyaabaha ka dibna raadi cilaaqaadyo iyo sida wax adag loogu soo bandhigo iyadoo la adeegsanayo naqshadeynta garaafka. Tusaalahan tusaale ahaan waxaan abuuri doonnaa wax yar sawirada xayeysiinta shirkadda wax soo saarka iyo maareeyaha waxyaabaha Netflix.
Waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan ku bilowno howsheena maskax-dhisidda waa a libreta ama sabuurad, meel kasta oo aan si raaxo leh ugu qori karno. Hadaad isticmaasho midabyo badan fiican.
1 Marka hore waa inaan ogaanno ujeedkeenna si aan u falanqeyno:
2 Si loo abuuro garaafka waxaan sameynay burburin yar oo ereyada muhiimka ah ee la xiriira fikradaha aan horay u aragnay.
Waa inaan marka hore ogaanaa kuweenna diid in la falanqeeyo:
Ka fikir nooca ama badeecada aan rabno inaan ku lafagurno
Mar alla markii aan helno qaybtaan si cad ayaan u sii amba qaadi doonnaa inaan isweydiino Ujeeddo.
Maxaan rabaa hel garaafkan?
Taasi qiimaha o sifooyinka Waxaan rabaa inaan qeexo?
Hay'ada Caafimaadka Aduunka arki doonaa garaafkeyga?
Markaan tan helno waxaan u gudbi doonnaa qayb aasaasi ah: falanqaynta tartanka iyada oo loo marayo wax yar barashada goobta. Waxa ugu fiican ee ku saabsan sameynta daraasaddan yar ka dib markii aan isweydiinay shakiyadii hore ayaa ah inaan hadda leenahay aragti diira badan oo ah cidda aan nahay iyo waxa aan dooneyno.
Mira sumado isku mid ah adaa leh
Sidee ayuu u noqon karaa iib ah?
Ma isticmaashaa a luqad sawiro awood badan ama wax xeelad badan?
Ujeeddada tusaalooyin inaad jeclaan lahayd inaad raacdo
Haddii aan si dhow u eegno jaantuskan ah Mcdonald's waxaan ogaanay in cmarkaa ma jiraan waxyaabo garaaf ah, kiiskan waxay doorteen inay abuuraan garaaf nadiif ah laakiin aad si fiican loo qorsheeyay. Jaantuskan waxay ku isticmaaleen astaanta sumadda sida pcunsur muuqaal ah, ku celceliyay astaanta miisaanka kor ilaa hoose ilaa waxay astaan ​​u tahay fikirka qoyska (dadka waaweyn iyo carruurta, waalidiinta iyo carruurta) waxaas oo dhami waxay si wada jir ah u maareeyaan sameynta dhawaaqa aan sameynayno markii aan aragno cunto aan jecel nahay: mmm, dhawaqani wuxuu leeyahay macno wanaagsan kuwaas oo si toos ah ula xiriira qaybta calaamadda, kiiskan cuntada degdegga ah. Midabada shirkadaha, naqshad taxaddar leh iyo wax fudud laakiin indho qabasho leh.
Hadda waxaan bilaabi doonnaa howsheena maskax-dhiska oo leh sumadda Netflix.
Muxuu qabtaa Netflix? waxay bixisaa waxyaabaha dhijitaalka ah ee filimada iyo taxanaha (maqalka).
Garaafka aan abuuri doonno waxaan raadineynaa matalaadda fikrad ku xigeenka de Netflix, waxyaabaha ay ka kooban yihiin aad ayey u wanaagsan yihiin oo way naga tagayaan ku xidhan kursiga Maalin iyo habeen oo dhan). Sidaan ognahay Netflix marka xilli cusub la sii daayo waxa ay qabato ayaa la wada geliyaa dhammaan cutubyada, tani waa wax aan dooneyno inaan ka tarjumno shaxeenna. Jaantuskeena waxaa loogu talagalay a dhalinyaro pubic, kuwa filimadaas iyo silsiladaha taxanaha ah ee habeenkii oo dhan ku hoyan kara daawashada taxanaha iyadoo aan indhaha laga qaban.
Maskax-abuurka: Waxaan higsaneynaa fikradaha kuwaas oo la xiriira astaanteena.
marathons taxanaha ah
Fikradahan ayaynu ku bilaabaynaa samee shaandho in qaar la haysto fikradaha adag, waxaan dooran doonaa fikradahaas kuwa ku habboon ujeedkeenna.
Waan la joognay saddex fikradood oo muhiim ah inuu matalo garaafkeena cusub. Xaaladdan oo kale waxaan mataleynaa fikradda habeenka Netflix hurdo la’aan.
Kahor intaanan bilaabin ka shaqaynta nidaamka sawir gacmeedka waa inaan eeg garaafyo kala duwan xayeysiinta astaanta si loo ogaado wax yar oo ah waxa khadka qaabeynta yaa adeegsada Netflix.
Si loo abuuro garaafka waxaan sameynay wax yar burburka keyword la xiriira fikradaha aan horay u aragnay.
Erayoxul: ereyada kuxigeenka, marathons, hurdo la'aan.
Kuwaas ereyada muhiimka ah ee loo turjumay sawirro Waxay noqon karaan: indhaha, daal, kafee + fadhiga, baalasha indhaha, teendhada + fadhiga. Waxay yihiin qaar ka mid ah sawirrada in waa la xiriiri karaa si fiican ula fikradeena. Waa qaybtan meesha ay tahay inaan si cad ugu caddayno dhagaystayaasheena sawirkeenna loogu talagalay, xaaladdan oo kale waa muuqaal mugdi ah maxaa yeelay bartilmaameedka dadweynaha waa waax yar.
Hadaad xiisaynaysid mowduucyadan oo aad rabto aan sii qoto dheerno wax yar oo dheeraad ah waad ka tagi kartaa faallo waana sameyn doonaa wax badan posts mowduucyadan ku saabsan kiisaska dhabta ah ee dhabta ah iyo fiidiyowyada qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Baro sida loo abuuro xayeysiin hal abuur leh oo shaqeynaya
Waad ku mahadsantahay boostada. Runtii xiise badan bay ila noqotay, dabcan, wax weyn bay ii taray.
Waxaan jeclaan lahaa inaad sameyso qoraallo badan oo ballaarinaya mowduucan!
Diego Navarrete dijo
Wanaagsan, waan u baahnaa tan, mahadsanid.
Ku jawaab diego navarrete
Wacom's Cintiq Pro Engine cusub iyo Cintiq Pro waxay usoo bandhigeysaa istuudiyaha qaabdhismeedka oo dhan
N5 Garaash Garage. Ku cun hamburger dukaan makaanik ah